WARBIXIN: Muqdisho oo Wali ay ka socoto Kaar aqoonsi ma heysataa ? – XAMAR POST
21 bishaan ayay ahayd markii Wasiirka wasaarada Amniga uu si cad u sheegay in dadka Shacabka ah ee isticmaalaya Wadooyinka Muqdisho aan la weydiin Karin Kaarka Aqoonsiga ee dowladda.
Amarka ka soo baxay Wasiirka amniga aya waxaa laga joogaa muddo 5 maalmood,waxaana muuqata in uusan dhaqan gelin, waxaana weli jira meelo badan oo dadka shacabka ah aan Kaar dowladeed la’aantiisa aysan mari Karin.
Meelaha dadka kararka dowladda weli lagu weydiiyo waxaa ka mid ah wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya.
Sidoo kale dadka shacabka ah ayaa culeys kuqaba xernaashaha wadooyinka qaar marka ay madaxda sare ee dowladda ka soo baxaan Madaxtooyada ee shaqooyinka u soo aadayaan banaanka ama marka ay dalka dibaddisa u amba baxayaan.
Wasiirka amniga ee Xukuumada Soomaaliya Axmed Abuukar Islow ducaale ayaa sheegay in dadka dhan aysan u shaqeyn dowladda suurta galna aysan ahayn in Kaar Aqoonsi la weydiiyo.
Shacabka Reer Muqdisho ayaa codsaday in la dhaqan geliyo oo sharci laga dhigo in dadka aan la weydiin kaar dowladeed loona baahan yahay in shacabka sinabad galyo ah oo xur ah ay u maraan wadooyinka Muqdisho.
Shacabka ayaa walaac ka muujinayo inuu amarkaan shaqeeyo oo uu dhaqan galo maadaama sida ay sheegeen amaro horay ay usoo saareen madaxda dowladda ay dhaqan geli waayeen, waxa ayna codsadeen in la dhaqan galyo sharcigaan sida uu qabo mid ka mid ah dadka ku nool muqdisho.
Hadii uu dhaqan galo amarkan waxaa culeyska ka yaraanayaa dadka reer Muqdisho oo dhib weyn ku qaba iney si xur ah gaadiidka ay wataan ula maraan meel walbo oo ka mid ah muqdisho oo aysan ka cabsaneyn cid weydiiso kaarka aqoonsiga dowladda sida ay qabaan dadka qaar.
Mid ka mid ah dadkii aan la kulanay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la dhaqan geliyo amarkaan si dadka reer muqdisho gaar ahaan kuwa gaadiidka watay uu culeyska ugu yaraado.
wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dadka shacabka ah loo diidaa iney maraan keliya waxa loo ogol yahay dadka heysta Kaarka Aqoonsiga dowlada.’
Dadka qaar ayaa gaadiidka ay wataan waxa ay dhigaan meel ka fog Madaxtooyada ka dibna lug ayay ku galaan maadaama madaxtooyada gudaheeda ay ku yaallan xarumo muhiim u ah dadka Soomaaliyeed sida Xarunta Wasaarada Waxbarashada, Warfaafinta iyo Wasaarado kale.
Saraakiisha Hay’addaha amaanka ee dowladda ayaa laga sugaya dhaqan gelinta amarka ka soo baxay Wasiirka amniga maadaama wasiirka uu amar ku siiyay Ciidanka in dadka shacabka ah aysan kaarka aqoosniga ee dowladda aysan wedyiin.